कर्णाली राजमार्गको कथा, सामान्य पहिरोमै दुई दिन बन्द के हाेला बर्खामा ? - Paschimnepal.com
कर्णाली राजमार्गको कथा, सामान्य पहिरोमै दुई दिन बन्द के हाेला बर्खामा ?
दैलेख । चैत्रको हावाहुरी र वर्षाकै कारण सामान्य पहिरो हट्न कर्णाली राजमार्गमा दुई दिन लागेको छ । शुक्रवार अवरुद्ध राजमार्ग शनिवार अवेर (साँझ) खुलेको छ । तिन ठाउँमा वर्षातका कारण समान्य पहिरो, बाढीले अवरोध भएको थियो । डिभिजन सडक सुर्खेतले सर्तकता नपनाउँदा राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रुहरु सामान्य पहिरोमै दुई दिन रोकिनुपर्ने बाध्यता रहेको हो ।
डोजर आउन ढिलाई हुँदा यात्रुहरुले दुई दिन राजमार्गमै दुःख पाए । कर्णाली राजमार्गमा भैपरिआउने विपतबारे तयारी नहुँदा आफुहरुले वर्षेनी पहिरो जाँदा दुःख पाउने गरेको जुम्लाका टंक उपाध्यायले बताए ।
दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले सडक डिभिजनको तयारी नहुँदा राजमार्ग खोल्न ढिलाई भएको बताए । ‘राजमार्गआसपास रहेका डोजरहरु प्रयोग गरेर शनिवार साँझवार सवारी संञ्चालनमा ल्याईयो ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाँस्कोटाले भने, वर्षातमा सडक डिभिजन तयारी अवस्थामा भएपनि चैत्रको महिना पहिरोको जोखीम नहुने भएको तयारी नभएकाले राजमार्ग खुलाउन ढिलाईएको हो ।’
शुक्रवार बन्द भएको कर्णाली राजमार्गका पहिरो गएको स्थानमा ११ बजेपछि डोजर पुगेर पहिरो पन्छ्याउन थालेको रार्कमका स्थानीय अर्जुन शाहीले बताए । सवैको सहकार्यमा राजमार्ग शनिवार साँझबाट सञ्चालनमा ल्याईएको दैलेखका प्रहरी प्रमुख ठाकुरप्रसाद पोखरेलले बताए ।
पहिरो तथा बाढीले कर्णाली राजमार्ग अन्र्तगत दैलेखको पादुका, सुगाछेडा नजिक र दहिखोलामा राजमार्ग अवरुद्ध रहेको थियो । अहिले आफुसंग राजमार्गमा गएको बाढी तथा पहिरो हटाउने मेशिन नहुँने भएकाले ढिलाई भएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए ।
‘हामीसंग अहिले पहिरो हटाउने मेशिन तयारी अवस्थामा छैन् ।’ डिभिजन प्रमुख अधिकारीले भने, वर्षातमा माग गरेअनुसार राजमार्गमा पायकपर्ने स्थानमा पहिरो हटाउन मेशिन तयारी अवस्थामा राख्छौं । जसले अवरुद्ध सडक छिटा खुलाउँछौं ।’
यसअघि पनि वर्षातमा कर्णाली राजमार्गमा वर्षातमा सडक खुल्न निकै सकस हुने गरेको थियो । यात्रुहरु राजमार्गमा हिड्नपर्ने बाध्यता रहेको थियो । वर्षमा बाढीले राजमार्गको दैलेख खण्डमा बढी बाढी पहिरो जाने हुँदा राजमार्ग अवरुद्ध हुने गर्दछ ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, चैत्र २६, २०७५ 5:31:45 PM
Prevगुमनाम बन्दै आचार्य हत्या प्रकरण,अनुसन्धानमा प्रहरीको बेवास्ता
Nextप्रदेश सभाबाट प्रदेश सहकारी विधेयक पारित